मस्तिष्क आधारभूत: इनाम प्रणाली हाम्रो व्यवहार चलाउँछ | इनाम पुरस्कार
मस्तिष्क आधारभूत इनाम प्रणाली
बुझ्न हामी किन स्वादिष्ट खाना, मायालु स्पर्श, यौन इच्छा, शराब, हेरोइन, पोर्नोग्राफी, चकलेट, जुआ, सोशल मिडिया वा अनलाइन किनमेलद्वारा संचालित हुन्छौं, हामीलाई इनाम प्रणालीको बारे जान्न आवश्यक छ।
यो इनाम प्रणाली मस्तिष्कमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रणाली मध्ये एक हो। यसले मनोरञ्जनत्मक उत्तेजनाहरू जस्तै भोजन, यौन, शराब आदि जस्ता हाम्रो व्यवहारलाई चलाउँछ र यसले हामीलाई दुखाइको दुखाइ (संघर्ष, गृहकार्य, आदि) बाट टाढैबाट टाढा बढाउँछ जुन बढि ऊर्जा वा प्रयास चाहिन्छ। हामी जहाँ हामी भावनाहरू महसुस गर्छौं र ती भावनाहरूलाई प्रक्रिया सुरु वा रोक्न ती प्रक्रियाहरूमा पर्दछ। यसमा दिमागको मूलमा मस्तिष्क संरचनाहरूको समूह हो। तिनीहरू वजन उठाउने व्यवहार वा दोहोर्याउन वा आदत बनाउँदैनन्। इनाम एक उत्तेजना हो जुन व्यवहार बदल्न को लागि भूख ड्राइव गर्दछ। इनामहरू सामान्यतया उत्तेजक रूपमा सेवा गर्छन्। यो, हामी हामीलाई दोहोर्याउने व्यवहार दोहोर्याउँछ जुन हामी बेस्सरीको लागी जान्छौं (अनौठो रूपमा) हाम्रो जीवनको लागि राम्रो छ, भित्री भए पनि। खुशी उत्तम इनाम वा उत्तेजना व्यवहार को लागी दुखाइ भन्दा उत्तेजना हो। गाजर एक छडी आदि भन्दा राम्रो छ।
इनाम प्रणालीको केन्द्रमा स्ट्रिटम। यो मस्तिष्कको क्षेत्र हो जुन इनाम वा आनन्दको भावना उत्पन्न गर्दछ। कार्यात्मक रूपमा, स्ट्रिटमले निर्णयको बहु पक्षहरूलाई समन्वय गर्दछ जसले हामीलाई निर्णय गर्न मद्दत गर्दछ। यसमा आंदोलन र कार्य योजना, प्रेरणा, सुदृढता, र इनाम धारणा शामिल छ। यो जहाँ दिमागले 'यो यसको लागि जानुहोस्' वा 'टाढा टाढा' सिग्नलहरू पठाउँदै नैनोसेन्डमा स्टिमुलसको मूल्य बढाउँछ। मस्तिष्क को यो भाग धेरै नुस्खा परिवर्तन को रूप मा नशे की लत व्यवहार या पदार्थ दुर्व्यवहार विकार को रूप मा। गहिरो भाडाहरू भएका बानीहरू 'राजनैतिक' सिक्नको रूप हो, यो बाहिरबाट नियन्त्रण गर्ने हो।
यो विषय मा एक उपयोगी छोटो TED कुरा हो खुशी जाल.
डोपामिनको भूमिका के हो? डोपामिन एक न्यूरोकोमिकल हो जुन मस्तिष्कमा गतिविधिको कारण हुन्छ। यो इनाम प्रणाली चालू हुन्छ। यसमा विभिन्न कार्यहरू छन्। डोपामिन भनेको 'go-get-it' neurochemical हो जुन हामीलाई उत्तेजना वा पुरस्कार र व्यवहारलाई हामीले बाँच्नको लागि चाहिन्छ। उदाहरणहरू खाना, यौन सम्बन्ध, सम्बन्ध र दु: खबाट जोगिन्छन्। यो पनि एक संकेत हो जसले हामीलाई उत्प्रेरित गर्दछ। उदाहरणका लागि, पार्किन्ससनको रोग भएका व्यक्तिहरूले पर्याप्त डोपामाइन प्रक्रिया गर्दैनन्। यसले उकालो आन्दोलनहरूको रूपमा देखाउँछ। दोहोर्याइन 'बलियो' तंत्रिका मार्गहरूको दोहोरियो, हामीलाई एक व्यवहार दोहोर्याउन चाहन्छु। यो हामी केहि जान्न कसरी एक मुख्य कारक हो।
मस्तिष्कमा धेरै सावधानीपूर्वक सन्तुलित छ। डोपामिनको भूमिकाको बारेमा प्रमुख सिद्धान्त हो प्रोत्साहन-सम्भावना सिद्धान्त। यो चाहानुहुन्छ, रुचि छैन। आनन्दको महसुस आफैं दिमागमा प्राकृतिक ओपियोड्सबाट आउछ जुन उत्साह वा उच्चको भावना उत्पन्न हुन्छ। डोपामिन र ओपियोड्स एकसाथ काम गर्दछ। Schizophrenia संग मान्छे को डोपामाइन को अतिप्रवाह हुन्छ र यो मानसिक तूफान र चरम भावनाहरु को कारण हुन सक्छ। Goldilocks सोच्नुहोस्। शेष। खाना, रक्सी, ड्रग्स, अश्लील आदिमा बिरुद्ध ती ती मार्गहरूलाई बलियो बनाउँछ र केहि मा लत बढाउन सक्छ।
डोपामिन र खुशी
मस्तिष्कद्वारा रिसाएको डोपामिनको मात्रा एक व्यवहार भन्दा पहिले आनुपातिक क्षमताको आनुपातिक हो। यदि हामी एक पदार्थ वा क्रियाकलापको साथ खुशीको अनुभव गर्छौं भने, मेमोरीको गठनले हामी आशा गर्छौं कि यो फेरि आनन्दित हुनेछ। यदि उत्तेजना हाम्रो अपेक्षाको उल्लङ्घन गर्दछ - अधिक आनन्दित वा कम मनोरञ्जन छ- हामी तसर्थ पछि हामी उत्तेजना सामना गर्न कम्तिमा कम्तिमा डोपामिन उत्पादन गर्नेछौं। ड्रग्स इनाम प्रणाली हटाइन्छ र डोपामिन को उच्च स्तर उत्पादन गर्छ र प्रारम्भिक ओपियोड्स गर्दछ। एक पटक पछि मस्तिष्क उत्तेजनामा ​​प्रयोग हुन्छ, त्यसैले डपामिनको बढि बढि आवश्यक पर्दछ। लागूपदार्थको साथ, एक प्रयोगकर्ताले अझ बढी चाहिन्छ, तर अश्लीलको उत्तेजनाको साथमा, मस्तिष्कलाई नयाँ, फरक र अधिक चौंकाउने वा अचम्मको लागी उच्च हुन आवश्यक छ।
प्रयोगकर्ताले सधैँ मेमोरी र पहिलो अति उच्च अनुभवको अनुभव गर्दैछ, तर सामान्यतया निराश हुन्छ। म नहीं ... असुरक्षित। एक प्रयोगकर्ता पनि एक समय पछि, 'आवश्यकता' अश्लील वा शराब वा सिगरेट, कम डोपामिन र तनावपूर्ण निकासी लक्षणहरूको कारणले दुखाइको मुखमा रहन सक्छ। यसैले निर्भरता को खराब चक्र। एक पदार्थ प्रयोग वा व्यवहार निर्भरता संग एक व्यक्ति मा, प्रयोग गर्न को लागि 'आग्रह', डोपामिन को स्तर को उतारने को कारण, 'जीवन या मृत्यु' को बावजूद को आवश्यकता को रूप मा महसुस गर्न सक्छ र धेरै खराब निर्णय लेने को लागि सिर्फ दर्द को रोकन को लागि नेतृत्व गर्न सक्छ।
डोपामिन को मुख्य स्रोत
यस मध्य-मस्तिष्क क्षेत्र (स्ट्रिटम) मा डोपामिन को मुख्य स्रोत को ventral tegmental क्षेत्र (VTA) मा उत्पादन गरिन्छ। यो फेरि इनामको नजर / क्यू / प्रत्याशित प्रतिक्रियाको प्रतिक्रियामा, क्रियाकलापको लागि तयार ट्रिगर लोड गर्दै यो इनाम केन्द्र, एनएसीसीमा जान्छ। अर्को कार्य - एक मोटर / आंदोलन गतिविधि, उत्तेजना संकेत 'यो जान', वा अवरोध संकेत, जस्तै 'स्टॉप' द्वारा सक्रिय, यो जानकारी प्रशोधन गरेपछि प्रिफर्मेक्सबाट संकेत गरिनेछ। अधिक डोपामिन इनाम केन्द्रमा छ, अधिक उत्तेजना इनामको रूपमा मानिन्छ। मानिसहरूको बाहिरबाट नियन्त्रण व्यवहार विकार, वा लतहरूको साथमा इच्छा वा उत्तेजित कार्य रोक्नको लागि पूर्वफ्रन्ट कोर्टसेक्सबाट संकेत एकदम कमजोर हुन्छ।
<< न्यूरोकोमिकल्स वयस्क ब्रेन >>